Ahoana ny fahafantarana fa ny mpianatra mahalala ny fomba hanatanterahana ny zavatra nianarany | Famoronana an-tserasera
Ahoana no hahalalana raha tsy mahomby amin'ny fitsapana fampiasana ny famolavolana
Ny tanjona lehibe ianarana dia mifototra amin'ny izay tianao hianarin'ny mpamorona amin'ny fotoana nahavitanao fiofanana.
Raha misy porofo dia ao ny fanontaniana dia tokony hifantoka manokana aminy na amin'ireo tanjona kendrena. Ny fampiasana an'io fomba io dia tena izy tena mahasoa hametrahana na tsia ny volavola iray nandalo ny fitsapana fampiasana.
1 Fepetran'ny fitsapana
2.1 Amin'ny faran'ny fivoriana, ny mpamorona dia tokony hanana fahaizana:
Raha miasa amin'ny famolavolana sary ianao ary mizara fahalalana ho an'ireo mpianatra vaovao amin'ity sehatra tsy mampino ity dia hanome torohevitra anao izahay ary izany dia ny fanaovana fitsapana azo ampiasaina, zavatra izay ho tonga mora raisina amin'ny ho avy.
Amin'ny fanandramana fampiasana, mila afaka mahita ny fomba ianao ireo mpandray anjara dia mahavita mamita ireo asa voalazaNa izany aza, inona no tena tokony hataon'izy ireo? Ahoana no hahitanao izay tena nianarany? Tsotra ny valiny, tsy maintsy fariparitan'izy ireo izany ary rehefa nanazava izany marina dia afaka milaza mazava tsara izay lafiny amin'ny famolavolana no tena nahomby ary misaotra ireo mason-tsivana fahombiazana azonao apetraka raha toa ka endrika mahomby ny famolavolana.
Ilay boky mitondra ny lohateny hoe Famolavolana fampianarana haingana nataon'i George Piskurich, manome anao fidirana amin'ny lisitra azo ampiharina, izay ilana ny fihetsika ilaina atombohy amin'ny masonkarena fahombiazanao.
Ohatra iray amin'izany ny tanjon'ny fahatakarana, izay mety "aseho" na "antsipirihany" ary amin'ity tranga ity, tsy ampy ny "mahatakatra" fotsinyFa kosa, ilaina ny filazan'ny mpamorona hoe "izany hoe" inona ny antsipiriany na ny fanaovana izay mitovy hanehoana azy, mba hampisehoana fa tena azony izany.
Ary avy eo, amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa, ny mpamorona dia tsy maintsy mitantana manazava na mandamina izay amin'ny ambaratonga avo kokoa dia "famolavolana" na "tombana" amin'ny ankapobeny. Na inona na inona fomba fanapahan-kevitrao hampiasainao hanombohana ny fahombiazan'ny fahombiazanao, dia tokony ho azonao atao ny mijery raha misy ny mpandray anjara nilaza na nanao izay notohanany. ny fahombiazan'ny asanao.
Ka rehefa manomana ny fitsapana ny fampiasana manaraka ianao ary mifantoka amin'ny lahasa, azonao atao ny manomboka manontany zavatra toy izao: «¿inona no tokony ho vitan'ny mpampiasa rehefa manana endrika iray izy?
Amin'ny faran'ny fivoriana, ny mpamorona dia tokony hanana fahaizana:
Araho mandritra ny adiny 3 farafahakeliny ho an'ny tetikasa manokana.
Mamorona faktiora ho an'ny mpanjifa mifototra amin'ny fotoana fanarahana.
Farito ny tsy fitovizan'ny ora fisoratana anarana sy ny fotoana fanarahana.
Amin'ny fananana ireo Fepetra fahombiazana 3, manana fototra ianao izay ahafahanao manana fahatsapana mazava kokoa momba ny karazana asa tokony homenao an'ireo mpampiasa.
Asa: Ny asa iray azonao omena ny mpandray anjara dia izao manaraka izao: "Ary satria efa nanao fisoratana anarana 3 ora ho an'ny tetikasa Atlas ianao dia tsy maintsy asehonao ahy ny fomba hanefananao ny vokatra Acme mifototra amin'ny fotoana fanarahan-dia anao".
Fanamarihana: Ny fitsipiky ny fahombiazana dia tsy itoviana amin'ny lahasa, satria ny sahan'asa dia misy toe-javatra misimisy kokoa ary izany dia satria nosoratana izy ireo mba hahafahan'ny mpampiasa mamaky azy ireo.
Mety hitovy izy ireo, na izany aza, ny masonkarena fahombiazana dia ho anao, fa ny ny enti-mody dia ho an'ny mpandray anjara, ao anatin'ny sehatry ny fizarana fampiasana.
Azonao atao ny mahita an'io mari-pahaizana momba ny fahombiazana izay nomenay anarana anao etsy ambony, dia mifototra amin'ny famaritana zavatra manokana, fa tsy ny fanatanterahan'ilay mpandray anjara asa iray. Izany dia satria mari-pahaizana momba ny fahombiazana, izay azonao ampiasaina mba hametrahana fanontaniana fanaraha-maso amin'ny andraikitra iray.
Amin'ity fomba ity dia azonao antoka izany ny maodely ara-tsaina ny famolavolana dia mazava mazava Ho an'ireo mpampiasa.
Mieritreritra an'izany, mamporisika anao izahay hanomboka amin'ny masonkarena fahombiazanao Ary avy eo manomboka manoratra ireo lahasa sy fanontaniana fanaraha-maso ianao, hahafahanao manome ny mpianatra ny fitsapana fampiasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahoana no hahalalana raha tsy mahomby amin'ny fitsapana fampiasana ny famolavolana
Ovao ny lokon'ny molotra amin'ny Photoshop
Topazo maso ny fironana endritsoratra vaovao amin'ny ho avy